प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ३०, २०७४ समय: १९:४३:१३
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ । हे ! अगस्त्य मुनि ! अब म तिमीलाई गणेश र कुमारको उत्पत्ति भएको र तारकासुर विनाश भएको कथा सुनाउँछु । महादेव र पार्वती माता कैलाशमा आनन्दसाथ रहँदै जाँदा बस्दै जाँदा एकदिन पार्वती माताले शरीरमा बुकुवा घस्ता निस्केका मयलको मूर्ति बनाई द्वारपाल बनाई राख्नुभएको थियो । त्यस बखत महादेव बाहिर जानुभएको थियो । फर्किएर घरमा आउँदा त्यो द्वारपालले भित्र जान दिएन । यो देखेर महादेवले क्रोधित भई त्यसको शिर काटी भित्र प्रवेश गर्नुभयो । महादेवलाई देखी ‘हजुरलाई ढोकामा कसैले रोकेन ?’ भनी सोध्नुभयो ‘रोक्न त खोज्दै थियो तर त्यसको शिर काटिदिएर आएँ’ भनी महादेवले भन्नुभयो । यो सुनी पार्वतीले ‘हे भगवन् ! त्यो त मेरो पुत्र हो, बडो विघ्न पर्न गएछ’ भनी करुणा भावले रुन र सुर्ता गर्न लाग्नुभयो ।
यस्तो देखी महादेवले भन्नुभयो – ‘हे पार्वती ! मैले नचिनेकोले गर्दा भूलमा परेछु, तर म उसलाई जसरी भएपनि जीवित पारिदिन्छु । तिमी सुर्ता नगर’ । यसरी पार्वतीको मन बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी महादेवबाट आज्ञा भयो – ‘हे गण हो ! तिमीहरू चारै दिशामा जाओ । त्यहाँ पहिले जसलाई दक्षिण सिरानी पारी सुतेको आफ्नासामु देख्छौ त्यसको शिर लिएर आओ’ भनी चन्द्रवाण दिई पठाउनुभयो । गणहरू चारैदिशामा खोज्दै जाँदै थिए । सामुन्नेमा दक्षिण शिर पारी सुतेको एउटा हात्ती देखापर्यो र त्यसलाई चन्द्रवाण प्रहार गरे । वाण गएर हात्तीको घाँटीमा लाग्यो र टाउको शरीरबाट अलग गरिदियो । त्यो हात्तीको शिर लगी गणहरूले महादेवका अगाडि राखिदिँदै भने – ‘हे ईश्वर ! हजुरको आज्ञाअनुसार सर्वप्रथम हामीले दक्षिण मोहडा गरी सुतेको यही हात्तीलाई देख्यौं र शिर लिई आउँदैछौं ।’ त्यसपछि त्यस हात्तीको शिर लगी उक्त द्वारपालको मूर्तिमा जोडिदिनुभयो र त्यस बालकको नाम गणेश भनी राखिदिनुभयो ।
तहाँउप्रान्त महादेव पार्वतीका साथ भुली घरभित्र मात्रै रहन लाग्नुभयो । यो बुझेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर आज्ञा गरे – ‘हे अग्नि ! महादेव पार्वतीका साथ भुलिरहन लाग्नुभएकोले यो ब्रह्माण्डको अब कसले रक्षा गर्ला ? कसरी रक्षा होला ? तिमी गएर वहाँलाई काशिपुरीमा ल्याउनुपर्यो ।’ यस्तो इन्द्र महाराजको आज्ञालाई शिरोपर गरी अग्निले हवस् भनी कैलाश दरबारमा पुगी भित्र जान लाग्दा द्वारपालले रोक्दा भए । अग्निले पनि वायुको रूप लिई ढोकाको माझमा ताला छिराउने प्वालबाट पसी भिक्षुक रूप लिई महादेव पार्वती भएका एकान्त स्थलमा पुगे । अकस्मात् भिक्षुक रूप अग्निलाई देखी क्रुद्ध हुनुभएका महादेवको तृतीय नेत्र खुल्नासाथ अग्नि नाश हुनलागेको देखी जगन्माता पार्वतीका हृदयमा मातृकरुणा उत्पन्न भयो र रिसाएका महादेवलाई शान्त गराउँदै पार्वतीले भन्नुभयो – ‘हे नाथ ! भिक्षा माग्न आएका भिक्षार्थीलाई नाश नगरिबक्सियोस् । अञ्जानमा आएछन् । केही दिऊँ र लिएर जानेछन् ।’ पार्वतीको यस्तो बिन्ती सुनी महादेवले आफ्नो वीर्य लिनु भई ‘लौ भिक्षा लैजा’ भनी दिन खोज्दा अग्निले पनि त्यो वीर्य हातमा थापी मुखमा हाली निलेर बाहिर निस्के । यसरी वीर्य निल्नाले अग्निलाई गर्भ रह्यो र साह्रै डराई गङ्गाका तीरमा कुशघारीमा गई निलेको वीर्य उकेली दिए । त्यो वीर्य वनमा आगो बले झैं देखिन थाल्यो । त्यसैबेला सप्तऋषिका पत्नीहरू गङ्गास्नान गर्न त्यहीँ पुगे । उनीहरूले ‘कस्ले आागो फुकेर गएछ, हामी पनि ताप्न जाऊँ’ भनी जान खोजे तर एउटीले चाहीँ ‘अर्काले बालेको आगो ताप्न हुन्न’ भनी गइनन् । अरु छ ओटीले भने त्यहाँ गएर तापी आएर सातैओटी घर गए । ती आगो ताप्ने छ ओटीलाई भने गर्भ रहिसकेको थियो । तिनका पतिहरूले थाहापाई गर्भ रहेको कारण सोधे । ती छ ओटी ऋषिपत्नीहरूले कुनै जवाफ दिन सकेनन् र क्रोधित भएर ऋषिहरूबाट श्राप पाए । यसरी श्राप पाएका छ ओटी ऋषिपत्नीहरूले गङ्गामा गएर अफ्नो पेटको वीर्य उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका भएर रहे । आगो ताप्न नजाने एउटी ऋषिपत्नी अरुन्धती भने आफ्ना पति वशिष्ठका साथमा नै रहिन् । उता छ ओटीले उकेलेका त्यस वीर्यबाट ६ मुखको बालक उत्पत्ति भई गङ्गाका पुत्र कुमार हुन गई महादेवका साथमा रहन लागे ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ श्रावण ०२ गते बुधबार
साप्ताहिक राशिफल (वि.सं. २०७५ आषाढ ३१ गतेदेखि वि.सं. २०७५ श्रावण ०५ गतेसम्म)
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ ३० गते शनिबार
चार दिनमा एक लाखले गरे शैक्षिक मेलाको अवलोकन
डा. केसीको अडानका कारण हुन सकेन वार्ता
मलेसिया भिसा लागेकालाई खुसीकाे खबर, सरकारले दियाे यस्ताे स्वीकृति